Ny atao hoe fanatontoloana dia ny fampiombonan-tsena sy ny fampihavanana ny olona, ​​indrindra vokatry ny fanalalahana ny tsena, ny fampandrosoan'ny fitateran'olona sy ny entana, ary ny fiantraikan'ny teknolojian'ita sy fifandraisana maneran-tany .
Taorian’ny faharavan’ny vondrona Tatsinanana, dia nipetraka ny lamina vaovao maneran-tany nanomboka ny taona 1991. Ny rafitra kapitalista sy ny fifanankalozana malalaka no nanjaka teto anivon’izao tontolo izao. Vokatr'izany dia, niha-niroborobo sy nahazo laka maneran-tany ihany koa ny Fanatontoloana.
1 1)	Famaritana
2 2)	Ireo antony nampiroborobo ny fanatontoloana
3 3)	Ireo mpandray anjara ao amin’ny Fanatontoloana
4 4	Ireo fiantraikan’ny fanatontolona
Ny Fanatontoloana ; Fifanankalozana malalaka eo amin’ny lafiny rehetra : ara-politika, ara toe-karena, ara-tsosialy…
Azo adika ihany koa fa ny fanatontoloana dia fitambaran'ireo trangan-javatra maro, ara-toe-karena, ara-politika, ara-tsosialy mampitambatra ho iray ny firenen-drehetra maneran-tany.
2)	Ireo antony nampiroborobo ny fanatontoloana
a-	Ny fivoarana lehibe teo amin’ny fitanterana
Nivoatra ny fitaovam-pitaterana : Vokatry ny fisian'ireo fitaovam-pitaterana manara-penitra toy ny fiara-manidina supersoniques, porte-containers dia lasa haingam-pandeha no mahazaka entana sy mpandeha betsaka izy ireo. Nanamora ny fifanankalozan’entana sy ny fifamezivezen’ny olona izany satria lasa azo antoka sy haingana ny fitaterana.
b-	Ny fandrosoana ara-teknolojia
Isan’ny nampiroborobo fatratra ny fanatontoloana sy ny fifanankalozana maneran-tany ireo fivoarana lehibe teo amin’ny fitaovam-pifandraisana sy fampitam-baovao toy ny : fahitalavitra, internet, telefaona, satelita… Nahafoana ny elanelan-tany mihintsy aza izany ka lasa toy ny « tanana kely iray izao tontolo izao »
c-	Ny fanalalahana ny fifanankalozana
Ny fametrahana ireo fifanarahana ho amin’ny fifanankalozana malalaka toy ny OMC ny taona 1995, dia nampivelatra sy nanamora ny varotra iraisam-pirenena satria, nanafoana ireo sakana teo amin’ny lafiny ara-barotra. Nofoanana na nahena ny haban-tseranana ary noraràna ny fanavankavahana ara-barotra…
3)	Ireo mpandray anjara ao amin’ny Fanatontoloana
Ireo firenen-drehetra: dia mandray anjara avokoa amin’ny alalan’ny fifanankalozana sy fifanampiana iraisam-pirenena.
Ireo orinasa maro rantsana (FMN) : orinasa lehiben’ireo firenena matanjaka, manana ratsa-mangaika any amin’ny firenen-kafa toy ny Shell, Total, the Coca-cola Company… Paik’ady ara-barotra sy hanamorana ny famokarana no ipariahany maneran-tany.
Ireo fikambanana iraisam-pirenena: Na fikambanana miankina (OIG) toy ny ONU, PNUD, UNESCO… na ny tsy miankina (ONG) toy ny Croix rouge international, WWF… dia mandray anjara fatratra amin’ny fiaraha-miasa sy fifanampiana iraisam-pirenena.
Ireo haino aman-jery : nohon’ny fivoarana ara-teknolojia, dia miantoka ny fifandraisana sy fampielezana vaovao maneran-tany ny : internet, ireo onjam-peo sy fahitalavitra maro toy ny RFI, TV5, France2, CNN…
4	Ireo fiantraikan’ny fanatontolona
a) ireo vokatra tsara
Firoboroboan’ny fifanankalozana sy fihamafisan’ny fifaninanana.
Fahazoan’ireo firenena maro fandrosoana ara-toe-karena, ara-kolo-tsaina sy ara-tsosialy…
Fananan’ireo faritra morontsiraka toerana lehibe hatrany.
b) ireo vokatra tsy niriana
Ny fifandonan’ny kolotsaina
Fitomboan’ny elanelana ara-paritra : ao ireo mahazo tombony, ao reo lasa anjorom-bala
Ny fanavankavahana ara-barotra manoloana ny firenena mahantra.
Ny fanjakazakan’ny firenena matanjaka, sy manankarena amin’ny firenena mahantra.
Ny fahamafisan’ny fahasamihafana sy tsy fitoviana eo amin’ny firenena mahantra sy manan-karena.
Ny fahapotehana sy fanjavonan'ny kolotsain'ny olona indrindra any amin'ny firenena mahantra.
Anjakan’ny fanatontoloana ny tontolo ankehitriny. Ny fampiharana rafitra mitovy maneran-tany no ahitana taratra izany : ny demokrasia malalaka ara-politika, ny fahalahana ara-toe-karena ary ny fampitoviana ny fomba fiainana ankapobeny anivon’ny mponina. Ny fanilikilihana ny faritra sasany, ny fampiharana ny proteksionisma ary ny fitomboan’ireo hetsika fanoherana ny fanatontoloana no fetrany.